_ E m i l y (@socalled_emily)'s conversations - Wattpad
_ E m i l y
သိတဲ့သူလည်း သိပြီးသားဆိုပေမဲ့ အချို့က အခုထိ မေးနေကြတုန်းမို့လို့ ထပ်ပြောပါမယ် ...
Me, Myself And My Fuckin' World ရဲ့ စာအုပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိစ္စကို အချိန်အကန့်အသန့်မရှိ ရွှေ့ထားပါတယ်လို့နော် ... ငါးလပိုင်းတည်းက announce လုပ်ပေးထားတာပါ ...
ပြီးတော့ ထပ်ပေါင်းပြောချင်တာက အခုချိန်မှာ ကိုယ်က ဘယ်စာအုပ်တိုက်နဲ့မှ အဆက်အသွယ်မရှိတော့ပါဘူး ...
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စအဝဝကြောင့် အလုပ်တွေလည်း ရပ်နားခဲ့ရသလို အချိန်ကြာလာလေ ကိုယ်တိုင်လည်း ထုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ လျော့နည်းလာလေမို့လို့ တိုက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ သွားပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... စာအုပ်တိုက်ဖက်ကလည်း နားလည်လက်ခံပေးတာမို့ အဆင်ပြေပြေပဲပြီးသွားတယ် ...
နောက် အရင်တစ်ခါပြောခဲ့သလိုပဲ စာအုပ်ထုတ်ခြင်း မထုတ်ခြင်းကို တော်လှန်ရေးကာလပြီးမှ ခေါင်းထဲပြန်ထည့်တော့မှာပါ ...
အဲ့တာကြောင့် လက်ခံထားတဲ့ တိုက်ပါမရှိတော့တာမို့ ခင်များလေးတို့လက်ထဲ စာအုပ်ရောက်လာဖို့က ပိုပြီးမသေချာတော့ပါဘူး ... လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်ပါ့မယ်ပြောထားတဲ့သူတွေကိုလည်း တကယ်အားနာပါတယ် ... ဆက်စောင့်မယ်ဆိုရင်လည်း မတားပေမဲ့ တအားတော့ မျှော်မနေပါနဲ့နော် ...
ဒါ စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်ပြောပြခြင်းပါ ... ဆိုတော့ ဒါပါပဲ ... အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါဘေဘီတို့ ...
စာလေးတွဆက်ရေးစေချင်တယ် Emily မျှော်နေမယ်နော်
I'm still waiting your next sweetie.
Please comeback quickly.
ဦးငယ္နဲ႔ ရွိန္း ရဲ႕ Story ေလး ေရးေပးအံုးမွာလားဗ်
My Dear Emmy ...
May the New Year bless you with health,
prosperity, happiness, and peace.
@ShuMmeee Happy New Year Honey ~ Thank you for the wish ^^
Me, Myself and My fuckin'worldကို တကယ်စောင့်မှာ အဖိုးတန်လေးထွက်တာနဲ့ အိမ်တန်းခေါ်ထားမှာ
ဘ၀မှာ fic ဖတ်ရင်းငိုတာ ပထမဦးဆုံးပဲ အများကြီးသဘောကျရသလို အမြတ်နိုးရဆုံးပဲ
@athu129194 Thank you honey! I really appreciate it ^^
သိတဲ့သူလည္း သိၿပီးသားဆိုေပမဲ့ အခ်ိဳ႕က အခုထိ ေမးေနၾကတုန္းမို႔လို႔ ထပ္ေျပာပါမယ္ ...
Me, Myself And My Fuckin' World ရဲ႕ စာအုပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိစၥကို အခ်ိန္အကန္႔အသန္႔မရွိ ေ႐ႊ႕ထားပါတယ္လို႔ေနာ္ ... ငါးလပိုင္းတည္းက announce လုပ္ေပးထားတာပါ ...
ၿပီးေတာ့ ထပ္ေပါင္းေျပာခ်င္တာက အခုခ်ိန္မွာ ကိုယၠ ဘယ္စာအုပ္တိုက္နဲ႔မွ အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့ပါဘူး ...
လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥအဝဝေၾကာင့္ အလုပ္ေတြလည္း ရပၷားခဲ့ရသလို အခ်ိန္ၾကာလာေလ ကိုယ္တိုင္လည္း ထုတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၵေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေလမို႔လို႔ တိုကၠို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ သြားေျပာျပျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ... စာအုပ္တိုက္ဖက္ကလည္း နားလည္လက္ခံေပးတာမို႔ အဆင္ေျပေျပပဲၿပီးသြားတယ္ ...
ေနာက္ အရင္တစ္ခါေျပာခဲ့သလိုပဲ စာအုပ္ထုတ္ျခင္း မထုတ္ျခင္းကို ေတာ္လွန္ေရးကာလၿပီးမွ ေခါင္းထဲျပန္ထည့္ေတာ့မွာပါ ...
အဲ့တာေၾကာင့္ လက္ခံထားတဲ့ တိုက္ပါမရွိေတာ့တာမို႔ ခင္မ်ားေလးတို႔လက္ထဲ စာအုပ္ေရာက္လာဖို႔က ပိုၿပီးမေသခ်ာေတာ့ပါဘူး ... လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ပါ့မယ္ေျပာထားတဲ့သူေတြကိုလည္း တကယ္အားနာပါတယ္ ... ဆက္ေစာင့္မယ္ဆိုရင္လည္း မတားေပမဲ့ တအားေတာ့ ေမွ်ာ္မေနပါနဲ႔ေနာ္ ...
ဒါ စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ေျပာျပျခင္းပါ ... ဆိုေတာ့ ဒါပါပဲ ... အဆုံးထိဖတ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးပါေဘဘီတို႔ ...
မမရေ ဦးအလင်းရောင်နဲ့ရှိန်းတို့ကို short storyလေးရေးမပေးတော့ဘူးလားဟင် စောင့်နေတာ မနှစ်တည်းက❤️
@Rnig_M ရေးမှာ ရေးမှာ ရေးမယ်ပြောဖူးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက ကတိအတိုင်း ရေးကိုရေးမှာရယ် စောင့်ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးပါနော် အကြာကြီးပစ်ထားမိလို့လည်း အားနာပါတယ် ♥
ကိုလင်းနဲ့ခွန်း ဇတ်ကောင်ကို မျက်လုံးထဲကမထွက်ဘူး တအားသဘောကျတယ် ဇတ်ကောင်အားလုံးထိမိတယ် တအားချစ်တယ်
@HsuMon979 Thank you love ... I really appreciate it ❤